Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguNorma
IBanga lesi-II leVicarage Cottage ibekwe kumbindi welali eyimbali yaseGreat Tey. Ekuqaleni kwakucingelwa ukuba zizitali kwiNdlu enkulu, eyayiligama elanikwa iThe Old Vicarage xa yayakhiwe ekuqaleni kwenkulungwane ye-19. ICottage ekuqaleni yaguqulwa yaba yindlu ngaphambi kwemfazwe kwaye yahlaziywa amatyeli aliqela kule minyaka. Yayiyi ‘Shed’ yomyeni wam ongasekhoyo kwaye yiyo loo nto umbhalo usemnyango weCottage.
I-Cottage ikulungele ukuzimela, kwaye yayisetyenziswa ngolo hlobo ngexesha lobhubhani ngabasebenzi be-NHS kunye nabasebenzi ababalulekileyo, kodwa yacocwa ngokucokisekileyo yaza yabulawa iintsholongwane emva koko, ubuncinci iveki phakathi kokubhukisha.
IVicarage Cottage imi kanye ecaleni kwekhaya lam, iNdala yeVicarage, kodwa izimele ngokupheleleyo. Ipholile kwaye igcwele isimilo, ilungele ikhefu lokuphumla. Igumbi lokulala elibanzi linebhedi yesofa ephindwe kabini. Kukho igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye nokufikelela kwigadi enkulu, efumaneka ngamaxesha onke, kodwa ehlotyeni jonga 'uHerbert' umtshini werobhothi.
Igumbi lokuhlala lineWiFi, iFreeview TV eneChromecast kaGoogle, izixhobo zomculo (iradio + cd player) kunye neencwadi ezininzi.
Kuphakathi komgama wokuhamba we-pub yendawo, iiCheckers, kunye nemizuzu embalwa yokuqhuba umgama ukusuka kwindawo yokutyela ecetyiswa kakhulu yeBarn. AbakwaCheckers kunye neBarn abapheki ukutya ekuqaleni kweveki, kodwa i-Swan Pub e-Chapppel, kwiLali elandelayo, ivulwa yonke imihla.
IColchester, eyona dolophu indala yaseBritane erekhodiweyo, ikumgama oziikhilomitha ezi-6 kuye nabani na onomdla kwimbali. I-Suffolk, edume ngeLizwe likaConstable ikude kancinane. Zininzi iindlela ezichongiweyo zeenyawo ezijikeleza ilali kubakhweli. Uxolo lokwenyani kunye nokubaleka okuthe cwaka.
Umbuki zindwendwe ngu- Norma
Ndifumaneka ngalo lonke ixesha, ukuba kuyimfuneko, kodwa ndiya kukushiya kwindawo yakho yabucala.